Halyeeyga Manchester United Roy Keane ayaa yimid
Halyeeyga Manchester United Roy Keane ayaa ku soo laabtay tababarka wuxuuna hogaaminayaa wadada isagoo ah tababaraha kooxda SKy Sports.
Qiimeynta ciyaartoyda ee Liverpool iyo
Casilla kaaliyihiisii ​​hore ee Manchester United Martin O’Neill wuxuu waqti kahelay Nottingham Forest sanadii 2019, laakiin hada asxaabta qaar ayaa usheegay inuu kusoo laabto shaqadiisa macalinimo ahaan doono.
Sida laga soo xigtay The Sun, Roy Keane waxaa ka go’an inuu noqdo tababare waqti buuxa ah laakiin ma haysto waqti go’an oo uu ku bilaabo.
Keane ayaa horay tababare ugu soo noqday kooxda Ipswich sanadkii 2011-kii tan iyo markaasna wuxuu noqday kaaliyaha Martin O’Neil. Laakiin waxaa ka sii horeeyay Sunderland, oo loo dallacsiiyay Premier League 2007-dii halkaana ay ku qaadatay hal sano ka hor inta uusan bixin 2008.
Intii lagu gudajiray xirfadiisii ​​tababarenimo ee Sunderland iyo Ipswich, Roy Keane wuxuu ku biiray Aston Villa iyo xulka qaranka Ireland isagoo caawiye u ahaa.
Sanadihii la soo dhaafay, wuxuu u shaqeynayay Sky Sports isagoo ka faallooda isboortiga waana mid ka mid ah ragga ugu saameynta badan ee ereyadooda ay si joogto ah warbaahinta uga soo xigato inta lagu guda jiro ciyaaraha.
Sida laga soo xigtay The Sun, Manchester United ayaa badal u noqon karta Ole Gunnar Solskjaer, kaasoo dhawaan ku biiray Darren Fletcher.
49-sano jirkaan ayaa ka mid ahaa xiddigihii Alex Ferguson ee ‘Class of 92’ ee sanadkii 1992-kii wuxuuna kabtan waqti dheer ka soo ahaa kooxda Manchester United.
Somalia at important time as leaders fail to
ex-High Minister Ahmed Ouyahia once more